25 Maleeshiyaad Shiico ah oo ku dhintay duqeymo ka dhacay Galbeedka Ciraaq.
Farmaajo oo R/wasaare umagacaabay Nin lasoo shaqeeyay Q.Midoobay.
Taliban oo soo furatay Boqolaal Maxaabiis Muslimiin ah oo ay ku jiraan gabdho Muhaajiraat ah [Warbixin].
Heshiis Nabadeed Mise Gummeysi cusub! W/Q: Wadaadyare
Macallimiin Dugsi Qur'aan oo lagu laayay deegaan katirsan Sh/dhexe.
Maxaa ka cusub gobolka Tigray ee dalka Itoobiya?
Monday December 30, 2019 - 12:07:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaare lixaad leh ayaa maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq kasoo gaaray duqeymo xooggan oo lagu beegsaday dhowr saldhig oo maleeshiyaadkaas ay ku lahaayeen gudaha Ciraaq.
Mas'uuliyiin katirsan Kooxda Xahsdiga ee xiriirka laleh Iiraan ayaa sheegay in ugu yaraan 25 dagaalyahan looga dilay duqeymo ka dhacay gobolka Al Anbaar.
Dadka duqeymaha ku dhintay waxaa kamid ah sarkaal muhiim ahaa oo madax ka ahaa gaaska 45aad ee Kataa'ib Xisbullaah Alciraaqi oo ah maleeshiyaad Shiico Ciraaqiyiin ah balse ay hubayso dowladda Iiraan.
Jawaad Kaadim Alrabiicaawi oo ah Madaxa maamulka Xarakada Xashdiga ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in 51 dagaalyahan ay dhaawacyo culus kasoo gaareen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka Mareykanka.
Wasiirrada Difaaca iyo Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa shir jaraa'id ku sheegtay mas'uuliyadda weeraradan xagga cirka ah ee ka dhacay wadanka Ciraaq.
Mark Esber wasiirka G/dhigga USA oo hadlayay wuxuu sheegay in sedax bartilmaameed ay ka fuliyeen galbeedka Ciraaq halka 2 weerar ay ka fuliyeen bariga Suuriya dhammaantoodna ay ku beegsadeen saldhigyo ay lahaayeen Maleeshiyaadka Kataa'ib Xisbullaahi Alciraaqi.
Maamulka Trump wuxuu sheegay in wixii hadda ka dambeeya aysan gacmaha ka laaban doonin weerarada daan daansiga ah ee uga imaanaya garabka Iiraan ee ku sugan gudaha Ciraaq, Jimcihii lasoo dhaafay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhigga K1 ee duleedka magaalada Kirkuuk waxaa ku dhintay Jeneraal howlgab Mareykankan ah waxaana weerarkaas fuliyay maleeshiyaad Shiico ah.
Isbedel dhanka maamulka ah oo ka dhacay Wilaayada Islaamiga ah ee Shabellada Dhexe.
FAAHFAAHIN: Mas'uul Ka Tirsanaa Maamulka Jubaland Oo Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Kismaayo
WAR DEG DEG AH: Al-Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyada Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Kismaayo
19 Sanadood oo Kasoo Wareegtay Weeraradii 11 September ee dalka Mareykanka ka Dhacay [Warbixin].
Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda Weerar ka dhacay Madaxtooyada iyo saraakiil sare oo lagu dilay.
Weerar Askar lagu dilay oo ka dhacay Galbeedka dalka Niger.
Gaari sahay usiday ciidamada AMISOM oo ka dhacay Sh/hoose.
Qarax Xoogan oo Markale ka Dhacay Deegaanka Janaay Cabdalle.